Lovers Lake Retreat - Lempilampi - I-Airbnb
Ivalo, Inari, i-Finland
Ufuna ukuhwebelana ngengcindezi yansuku zonke, ukukhala kwefoni ehlakaniphile okungapheli kanye nama-imeyili ahlaselayo ukuze uphumule kahle endlini encane ethokomele, uhambo lokuzindla ehlathini nohambo lwesikebhe sothando ngaphansi kwelanga laphakathi kwamabili & Aurora Borealis ?
Imizuzu engu-25 kuphela. kude ne-Ivalo Airport kanye ne-45 min. kusukela e-Saariselkä Ski Resort, i-Lovers' Lake Retreat itholakala ogwini lweLake Rytijärvi nangaphakathi kwaMagical Forests of Lapland.
Indawo ekahle yokuthola indlela yokuphila eyiqiniso ye-minimalist yaseFinnish evumelana neMvelo.
ILovers Lake Retreat iyindawo yangasese eyakhiwe ngamabhilidi amathathu ahlukene wonke asebenzisa izinhlelo zokushisisa izinkuni. Ikotishi elikhulu neSauna (zombili zinikwa amandla amaphaneli elanga ne-wind turbine), Ikhishi Lasehlobo elinikeza isipiliyoni sokupheka esivulekile esingenakuqhathaniswa nesokudlela.
Ikotishi elikhulu linekhishi elivulekile, isiqandisi esisebenza ngegesi, ihhavini nesitofu. Indawo yomlilo emise okwebhere eyakhiwe ngesandla igcina lonke ikotishi lifudumele. Amanzi ahlanzekile asetshenziswa nsuku zonke angathwalwa echibini ngamabhakede futhi amanzi ahlanzekile angaphuzwayo angaqoqwa esiphethwini semvelo seLover's Lake.
I-sauna eshiswe ngezinkuni kanye negumbi leziko eliseduze yizindawo ezinhle zokuzipholela kusihlwa. Ayikho indlela engcono yokuvala usuku lokuphumula kunokujabulela i-sauna eshisayo enamakhaza ambalwa! I-Finnish Bucket shower idinga amanzi echibi angashiswa ethangini elikhulu. I-BTW, amanzi echibi anezakhiwo ezihlukile zokuthambisa isikhumba nezinwele, kufanele uzame!
Ikotishi lifakwe nebhavu elikhulu eliyindilinga elishisisa ngokhuni langaphandle lapho ungabuka khona ukubukeka kwemvelo okumangalisayo noma izibani ze-artic. Ngesikhathi sasebusika ubhavu ongaphandle ungasetshenziswa noma nini lapho izinga lokushisa langaphandle lingaphansi kuka -15 Celsius (ngezizathu zempilo nezokuphepha)!
Ikhishi lasehlobo likuhlomele ngokuphelele ukupheka ukudla okumnandi lisebenzisa indlela yomlilo futhi linikeza umbono omangalisayo wechibi. Isidlo esiyingqayizivele sezithandwa, abangani kanye nemindeni!
Isitoreji Sezinkuni & Nezindlu zangasese
Ukunikezwa kwezinkuni zeziko kugcinwa ekhabetheni elihlukile leshede, isivakashi siyacelwa ukuthi sisebenzise izinkuni ngendlela enengqondo nangokuzibophezela. Indlu yangasese eyomile eyenza umquba wemvelo itholakala ngemuva kwendlu encane.
Imali yokuqasha iyinani elifanelekile labantu abangu-2. Isivakashi esengeziwe sizokhokhiswa u-15 Euro/ubusuku.
Ikotishi lilungele izingane kanye nezingane ezincane ngenkathi yasehlobo, nakuba izinto eziningi ongase ube nazo ekhaya zingase zingatholakali. Uma uhamba nezingane ezincane sicela usazise kusengaphambili futhi sizohlela umbhede wengane, isihlalo somntwana esiphezulu kanye nezinye izinsiza ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo ngangokunokwenzeka.
Izilwane ezifuywayo zamukelekile e-Lovers' Lake Retreat. Nokho, izivakashi zicelwa ngomusa ukuba ziqinisekise ukuthi azidali umonakalo endaweni noma izilwane zasendle ezizungezile.
Ikotishi linesikebhe esincane sokugwedla, izinduku ezimbalwa zokudoba kanye namanetha azosetshenziswa izivakashi. Uma unenhlanhla ungase ubambe i-trout, i-Whitefishes, i-Perches nezinhlanzi ze-Pike ezingamnandi kangako. Eduze kwendlu ye-woodshed's, uzophinde uthole idivayisi yendabuko yangaphandle yokubhema uma uthanda izinhlanzi ezibhemayo.
Ihlathi elizungezile liyindawo ekahle yokuthatha uhambo lokuzindla noma ukucosha amajikijolo Aluhlaza, Amajikijolo Amafu, Ama-Cowberry namakhowe ngasekupheleni kwehlobo nasekwindla. Ikotishi libuye libe namabhodi amabili okugwedla aphephethekayo akuvumela ukuthi ujabule ekutholeni ichibi ngenkathi uzivocavoca maphakathi neNdalo!
Ukuze uthole imisebenzi eyengeziwe kanye nolwazi, sicela uhlole Incwadi yethu Yeziqondiso ku-Ivalo! Sikuhlanganisele inqwaba yolwazi oluwusizo olufaka amathiphu ngendawo, ukuthi ungathola kuphi igrosa, izindawo zokudlela ezishisayo, iziphakamiso zokuhamba izintaba, ukuyothenga, ukubuka indawo nokunye okuningi.
Umama wami, u-Jaana uzokwamukela sonke isivakashi endaweni mathupha, abonise yonke indawo nokuthi izinto zikagesi zisebenza kanjani ukuze ube nesikhathi nesipiliyoni ongasoze wasikhohlwa!
Hlola ezinye izinketho ezise- Ivalo namaphethelo